एचआइभी संक्रमितले निरोगी बच्चा जन्माए | चितवन पोष्ट दैनिक
Updated: १६ कार्तिक, २०७०
एचआइभी संक्रमितले निरोगी बच्चा जन्माए
१६ कार्तिक, २०७०
भरतपुर । आमा एचआईभी संक्रमित भए पनि शिशु निरोगी जन्माउने कार्य भरतपुर अस्पतालमा प्रभावकारी भएको छ । अस्पतालमा सञ्चालित एएचएफ नेपालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमअन्र्तगत शिशु निरोगी जन्माउने कार्य प्रभावकारी भएको हो । भरतपुर अस्पतालमा आएका ४९ एचआईभी संक्रमित महिलाले जन्माएका बच्चामध्ये १४ शिशुमा यसको लक्षण नदेखिएको भरतपुर अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. उन्नत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘आमालाई सुरक्षित प्रसुती गराउन सके मात्रै पनि उनीबाट जन्मने शिशुलाई एचआईभी मुक्त राख्न सकिन्छ’, उहाँले थप्नुभयो, ‘महिला गर्भवती भएलगत्तै औषधी खानुपर्छ भने शिशु जन्मिएको पाँच छ महिनासम्म पनि औषधि खुवाउनु पर्छ ।’
संक्रमित गर्भवती महिलालाई गर्भअवस्थाबाटै उपचारमा राख्ने र अस्पतालमै शिशु जन्मिएपछि पनि त्यो शिशुलाई पाँच छ महिनासम्म उपचार गरेर उसलाई एचआईभीमुक्त बनाइएको डा. श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार अस्पतालमा जन्मिएका ४९ जना बालबालिकामध्ये तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने ११ जनाको अवस्था संक्रमित भए नभएको भन्ने अज्ञात नै छ । ‘हामीले ११ जना बालबालिकाको अवस्था स्पष्ट हुन सकेका छैनौँ’, उनले भने ।
अस्पतालले संक्रमित आमाबाट जन्मिएका ३१ जना बालबालिकालाई उपचारमा राखेको थियो । ‘एचआईर्भ लागे पनि लामो समय जिउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट छ’, जिल्ला एड्स समन्वय समिति चितवनका संयोजक रामहरि न्यौपानेले भने, बालबालिका मात्रै होइन, एन्टिरेक्टो भाइरलले बयस्क मानिसको पनि आयु लम्बिन्छ ।’ एचआइभी संक्रमितलाई माया र ममता गर्न सकिए मात्रै पनि संक्रमितको आयु लम्ब्याउन सकिने उनको तर्क छ ।
यसबीच एचआईभी एड्स संक्रमितलाई हेयका दृष्टिले हेर्न नहुने शुक्रबार भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । एएचएफ नेपालको आयोजनामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले एचआईभी संक्रमितहरुलाई हेय र भेदभाव न्यूनीकरण गराउनका लागि सञ्चार माध्यमको भूमिका उल्लेखनीय रहेकोमा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा डा. श्रेष्ठ, जिल्ला एड्स समन्वय समिति चितवनका संयोजक रामहरि न्यौपाने, भरतपुर अस्पतालमा सञ्चालित एआरभी कार्यक्रमका संयोजक कृष्णहरि सापकोटालगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै सापकोटाले अव एचआईभी भयो भनेर डराएर र लुकेर बस्नुपर्ने दिन नभएको बताए । ‘अव एचआईभी संक्रमित भएमा मात्रै पनि परीक्षणका लागि आयो भने उसलाई औषधीले आयु बढाउन सकिन्छ’, उनले भने । भरतपुर अस्पतालमा गर्भवती महिलालाई सुरक्षित प्रसुती गराउनुका साथै संक्रमितलाइ एन्टिरेक्टो भाइरल औषधि खुवाइने पनि उनले जानकारी दिए ।